Chii chinonzi chikamu chepamusoro: Mabasa, kuumbwa uye masevhisi | Ehupfumi Zvemari
Mukati mehupfumi mune zvikamu zvakasiyana zvinosanganisira zviitiko zvakasiyana. Chikamu chepuraimari chinoshandura zviwanikwa zviite mbichana zvechikamu chechipiri, chinova indasitiri. Ikoko, mbishi zvigadzirwa zvinoshandurwa kuita zvigadzirwa zvevatengi. Asi chii chikamu chepamusoro? Izvi zvinoenderana nezviitiko zvese izvi zvine chekuita nekushandura masevhisi ezvinhu kana zvinhu zvisiri kugadzira. Mune mamwe mazwi: Suye iri basa rekuzvarwa kwemasevhisi ane chinangwa chekuzadzisa zvido zvevagari mune chero chikamu chenyika.
Icho chakakosha chikamu chekugadzira mune yazvino system. Inosanganisira zvimwe zvikamu zvidiki senge zvekutengeserana, zvekushanya, zvemari, zvekufona uye kunyangwe mamwe masevhisi Paul Krugman, anowana mubairo nezvehupfumi, anotenda izvozvo Kuderera kwekugadzirwa kwezvinhu mubasa rebasa uye kunetsekana kunowanikwa mukuzvivandudza ndicho chikonzero chikuru chekudzikira kwenyika zhinji maererano nemararamiro ehupenyu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo tertiary chikamu, mabasa ayo uye kuumbwa kwayo, usazeze kuenderera kuverenga.
1 Mabasa ebazi redzidzo yepamusoro
2 Kuumbwa kwenzvimbo yepamusoro
2.1 Veruzhinji makambani ekushandira
3 Hupfumi hwebasa
Mabasa ebazi redzidzo yepamusoro
Pakati pezvikamu zvitatu, chikamu chepamusoro ndechekuti chinoronga, chinofambisa uye chinotungamira zviitiko zvinobudirira zvezvimwe zviviri (chikamu chepuraimari nesekondari / chikamu cheindasitiri). Nekuda kweizvi, inoonekwa senge chigadzirwa chikamu. Kunyange zvakadaro, mukati mezviitiko zvehupfumi, ayo makuru mabasa kugovera uye kudyiwa.
Kana chikamu ichi chikakunda kupfuura mamwe maviri, maitiro ekutsvaga basa anoitika mune dzakasimukira hupfumi. Iko shanduko yemagariro uye hupfumi inowedzera zviitiko zvebasa, kana izvo zvinouya zvakafanana: kubva kumatunhu epamusoro. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti chikamu ichi ndicho chinotora chikamu chakakwira kwazvo chevanhu vanoshingaira uye icho chinopa chikamu chakakura kuGDP yenyika yakatarisana. Zvakare, maitiro ekutsvaga basa anoreva kwete chete kukura kwemasevhisi, asiwo kupatsanurwa kwenzira yekushanda mubazi repamusoro kune mamwe matunhu.
Kuumbwa kwenzvimbo yepamusoro
Kuti tipindure mubvunzo wekuti chikamu chedzidzo yepamusoro chii, isu tinofanirwa kugara tichifunga zvese zvikamu zvidiki zvinoita mabasa. Pari zvino, chikamu chikuru chevashandi ndechumabasa. Pazasi isu tichaona runyorwa rwezvikamu zvidiki zvakabatanidzwa izvo pamwechete zvinoumba chikamu chepamusoro:
Zviitiko zvekuzorora, tsika, mitambo uye zvinoratidzwa. Izvi zvinosanganisira ma audiovisual maindasitiri (mimhanzi, firimu, mitambo yemavhidhiyo). Mukupesana, iyo indasitiri yekutsikisa uye graphic art chikamu chechipiri chikamu.
Zvemari zviitiko: Apa ndipo panouya mabhangi, misika yemasheya, inishuwarenzi uye mamwe misika yemasheya inopinda.
ICT kunyorera (ruzivo uye tekinoroji matekinoroji): Internet, komputa.
Commerce: Izvi zvinosanganisira franchise, Wholesale uye chitoro.
Veruzhinji basa / veruzhinji manejimendi: Izvi zviitiko zvine chekuita nerubatsiro rwemunharaunda, vamiriri vezvematongerwo enyika, chengetedzo uye chengetedzo (mapurisa, vanodzima moto, mauto, kuchengetedzwa kwevanhu, nezvimwewo) nekutonga (vanyori, magweta, vatongi, nezvimwewo).
Kugamuchira vaeni nekushanya.
Midhiya: Chaizvoizvo iwo mapepanhau, terevhizheni uye redhiyo.
Kambani Services: Manejimendi uye manejimendi emakambani, kushambadzira, kubvunza, kuraira zvehupfumi, basa repamutemo, kudyara, kwehunyanzvi sevhisi
Zvemunhu masevhisi: Iwo masevhisi ane hukama nehurombo hwehurumende (dzidzo, kuchengetwa kwevatano, hutano, mabasa eruzhinji, vanogadzira vhudzi, nezvimwewo)
Telecommunications: Idzi ndidzo nzira dzemunhu oga dzakadai sekufona.
Veruzhinji makambani ekushandira
Kazhinji, panogadzirwa zvivakwa zvekambani yekushandisa chikamu chechipiri chikamu kana cheindasitiri. Zvisinei, pavanopa rubatsiro kuvanhu vanoonekwa sechikamu chebazi redzidzo. Bhizinesi rimwe chetero rinogona kuverengerwa mune zvese pasina dambudziko. Semutemo, hupfumi hunosimukira mukufambira mberi kune chimiro chinovakirwa pabasa. Yekutanga yaive United Kingdom, iyo yakabva pahupfumi hwekurima ikaenda kune yeindasitiri kudzamara yasvika kumasevhisi sehwaro. Humwe hupfumi, hunonziwo hupfumi hweshure-maindasitiri, hwakatopfuura uhwo hweChirungu.
Kana zvese zvinogoneka zviitiko zvehupfumi zvikaitwa sevhisi, isu tinotaura nezve hupfumi hwebasa. Kuti tinzwisise zvirinani iyi pfungwa, ngatipei muenzaniso: IBM (International Business Machines Corporation) ikambani inozivikanwa yenyika dzakawanda inogadzira nekutengesa software ne Hardware. Iyi kambani inobata bhizinesi rayo sekunge yaive bhizinesi rebasa. Kunyangwe paine chokwadi chekuti makomputa aanogadzira anoramba ari ekushanda-kwepamusoro, inoona zvinhu zvepanyama sechikamu chidiki cheiyo bhizinesi mhinduro chikamu
Makambani mazhinji akaona kuti kuomarara kwekudiwa kwemhinduro dzebhizimusi kwakadzikira zvakanyanya pane zvemhare. Shanduko yakaenzana inogona kuwanikwa maererano nemhando yemitengo yemubhadharo. Pamusana, Vagadziri vane mari yakadzikama nekuda kwezvibvumirano zviri kushanda, kupesana nekugamuchira mubhadharo wenguva imwechete kubva kumidziyo yakagadzirwa
Kazhinji, indasitiri kazhinji yakavhurika kwazvo kumakwikwi uye kutengeserana nedzimwe nyika kupfuura chikamu chepamusoro. Mhedzisiro inoburitswa neiyi ndiko kuwedzera kwekukwikwidza kurwisa kwakatambiswa nehupfumi hwekutanga hwemaindasitiri pachikamu chenyika dzakatanga kusimukira mumashure. Izvi zvinodaro nekuti mutengo wekugadzira, kunyanya mutengo wevashandi, wakadzikira zvakanyanya muhupfumi hutsva hwemaindasitiri. Chibvumirano chekugadzira mune hupfumi hukuru chingave chikonzero chimwe nei vachivimba zvakanyanya pabazi rebasa.
Kune vamwe vezvehupfumi vanoyambira kuti masevhisi ane mamwe matambudziko anokosha. Mumwe wavo ndeumwe wevakakunda muBhangi reSweden Prize muEconomics Sayenzi mukurangarira Alfred Nobel, muAmerican Paul Krugman. Anonongedzera kuti kune masevhisi asingatengeswe kunze uye kuti zvinhu zvakawanda zvehupfumi muchikamu chepamusoro zvinowana zvakapusa mukugadzirwa nekuda kwemusiyano mukugadzirwa kwemaindasitiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi chikamu chepamusoro